dia tsy manana ahiahy ny ligin'Analamanga satria dia nahavita tanteraka ny fifaninana izy ireo ary efa miandry izay fitohizan'ny fifaninana eto Madagasikara, izany anefa dia miankina amin'ny fivoriana izay mbola ho tontosaina ny Federasiona amin'ity herinandro ity. Fa mahakasika izay fivorian'ny federasionina izay indrindra dia nanome ny heviny ny Filohan'ny ligin'Analamanga mahakasika ny fisafidianana ny orinasa izay hampiankanjo ny Barea manomboka izao. Tamin'izany ary no nanambaran'i Tôta Henintsoa filohan'ity ligy ity fa tsy mendrika ny ekipa nationaly malagasy intsony ny mpampiankajo tsy matihanina azy ireo satria dia efa manana ny toerana ambony eo anivon’ny sehatra Afrikana nyBarea ankehitriny ka mendrika tokoa raha mba zavatra avo lenta amin’izay no hampiakanjoana azy ireo. Raha ny hevitro ,hoy hatrany ity filohan'ny ligy Alfa ity dia aleo mijery izay tena efa fantatry ny maro no hisafidianana hiaraha-miasa. Mametra-panontaniana koa etsy ankilany izany i Tôta Henintsoa hoe : "rehefa inona no masi- mandidy eo amin’ny sehatry ny baolina kitra eto amintsika ireo filohan'ny Ligy ary rehefa inona no atao an-kilabao ? Ny zavatra toy ireny mantsy dia ny Fivoriambe « Assemblé General » no manapaka azy, hoy izy.